सगरमाथा दर्पण: अन्लाईन मित्रता
यसै क्रममा एकहप्ता बितेर अर्को हप्ता पनि बित्यो । तर मेरो र उनको अन्लाईन च्याटिङ कार्यक्रम भने रोकिएको थिएन ।यसै क्रममा कति दिनहरु बिते अनि बित्ने क्रम पनि जारी नै‌ थियो। एवम क्रममा एकदिन उनी सँग फेश बूकमा अन्लाईन च्याटिङ गरिरहेको थिए। यसै क्रममा उनले एउटा अनौठो शब्द भनिन भरे पछी मैले आँफैले अनुमान लगाउदा पो थाहा भयो त्यो दिन त उन्को जन्मदिन रहेछ । त्यसैले उन्ले त्यस्तो कुराहरु पोस्ट गरेको जस्तो लाग्यो । जे सुकै होस् उनी र म कुरा लामो समयको कुरा पश्चात साथी नै भैसकेका थियौ । यस्तै गरी केहीले जिस्किने कहिले यथार्थ कुरा गर्ने गरिन्थ्यो । त्यसैले गर्दा पनि म अस्पस्ट भएको थिए । र हुनु पनि स्वभाविक नै लागेको थियो । पछी मैले उनको जन्मदिनको अवसरमा उनलाई बिभिन्न माध्यम बाट जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना हरु सम्प्रेशण गरेको थिए । उनले कस्तो रुपमा लिइन त्यो त मलाई थाहा भएन थाहा हवोस पनि कसरी ?
यसै गरी उनी सँग भेट भएदेखी त्यस्तै फरक-फरक स्वरूपका गरी ४-५ वटा सायरी "Quotation" हरु पठाएको थिए होला । प्राय मेरो बानी के छ भने नयाँ फोन नम्बर हरु भेटाए भने त्यो नम्बरमा फोन गरिहाल्ने, यसैक्रममा मैले उन्लाई कल पनि गरेको थिए उनको मोबाईलमा भरे पछी उनिसँग फेरी अन्लाईनमा भेट भयो । अन्लाईनमा भेट हुँदा उन्लाई मेरो कार्य ठीक नलागेको कुरा गरिन । वास्तवमा त्यो उन्को कुरा ठिकै पनि थियो । अनी मैले आँफैँलाई धिक्कारेँ ,जस्तो भए पनि आफुँले गरेको कार्य लाई पनि थोरै मात्रमा भए पनि धिक्कारेँ । किन यति सस्तो गरेको होला एसएमएस अनी कल पनि महँगो हुनु नि । कति सजिलो, निर्धक्क अपरिचीतलाई नानाथरी लेख्न पाइने, न डर न लाज । वर्तमान सुचना र प्रबीधीको कारणले ल्याएको आधुनिक प्रविधिलाई धिक्कारेँ । पछि मैले अन्लाईनमा नै सरी भन्दै छुटिए । तर जे सुकै भए पनि मलाई कुनै प्रभाव परेन आखिर म पनि त औसत पुरूष नै त हुँ नि । प्रतिक्रिया किन लेख्दिनथेँ लेखिहाले फेश बुकमा ।
यसै गरी मेरो उनी सँगको अन्लाईन मित्रता लाई तिलान्जली दिए । आखिर त्यही भयो जुन कुरा मैले सोचेको थिए । त्यस पछिका दिनहरुमा न म उनी सँग कुरा गर्छु न कमेन्ट सम्बन्ध नै समाप्त भएको मैले महसुस गरेको छु । त्यसैले अवका दिनहरु मा कसैले पनि त्यस्ता साथीहरु सँग भेट्नु नपरोस ।
जय नेपाल । जय सगरमाथा दर्पण ।
प्रकाशक : binod k. Rijal समय : 6:06 PM
बिधा जीवनको गोरेटोमा
Ashesh November 23, 2009 at 12:56 PM
मलाई त हाँस उठ्यो पढ्दाखेरि । सायद आफ्नो पनि यस्तै यस्तै experience भएर होला । हामी सवै एकै हौँ हा हा हा.......
Asank November 23, 2009 at 6:37 PM
online friendship sastai vayako chh ajakal
tyasaiko pravab ho ki jasto lagchh malai
Basanta November 24, 2009 at 9:11 AM
यो अनलाईन फ्रेण्डशिप भन्ने कुरामा त्यति रस बस्या छैन मेरो चाहिँ। के अँध्यारोमा गोली हानेर बसिरहनु जस्तो लाग्छ मलाई त!
umer ma yasta kahanai bane.. pachhi ko laagi samjhana hunchha ni....im loving it